ट्याक्सी चालकको पीडा : जसले लकडाउनमा प्रहरीसँग लुकीछिपी दुई छाकको जोहो गरे (भिडियोसहित) | Kendrabindu Nepal Online News
३१ श्रावण २०७७, शनिबार १८:१८
विश्व यतिबेला कोरोना भाइरस महामारीको चपेटामा परेको छ । भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि विश्व आफ्नै हिसाबमा लडिरहेको छ । लकडाउनले विश्वभरका उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा विश्व अर्थतन्त्र नै धरासायी बनेको छ । नेपाल पनि यो महामारीबाट अछुतो रहन सकेन । भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले चार महिनासम्म लगाएको लकडाउनले कति व्यवसाय पलायन नै भए भने कतिपय पलायनको अवस्थामा पुगेका छन् । हजारौं रोजगारविहिन बन्न पुगे ।
त्यसमा पनि, कोरोना रोकथामको लागि लागू गरिएको लकडाउनले नेपालको सबै भन्दा बढी पर्यटन र यातायात व्यवसायमा प्रभाव परेको छ । चार महिना लकडाउन हुँदा यातायात क्षेत्रमा आवद्ध ४० लाख यातायात मजदूरको रोजीरोटी गुमेको तथ्यांकले देखाएको छ । यद्यपि पछिल्लो समय सरकारले अन्तर्जिल्ला भित्रै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको अनुमति दिएसँगै व्यवसायीले केही राहत महशुस गरेका छन् । यसरी सरकारले अनुमति दिएसँगै सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका ट्याक्सी पनि सञ्चालनमा आएका छन् ।
यसैक्रममा आज हामीले लकडाउनको अवस्था र पछिल्लो समयको केही सहज परिस्थितिमा ट्याक्सी चालकले भोग्नु परेका दुःखका सम्बन्धमा विगत २५ वर्षदेखि काठमाडौंमा ट्याक्सी चलाएर नै जिबिकोपार्जन गर्दै आएका भोजपुरका प्रदिप राईको कथा लिएर आएका छौं । विगत ५ महिना यता उनको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ त ? आफ्नो परिवारका लागि उनले लकडाउनका समयमा कस्ता कस्ता अनुभूति संगाले त ? आज हामीले यहि विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यो भिडियो सामग्री तपाईंहरू समक्ष पस्कँदै छौं ।
Prevफेरिएको तीज गीतबारे के भन्छन् जानकारहरू ? (भिडियोसहित)